Sheekada Isi Seeg Qaybta 8-aad: Sheekada oo meel gabo gabo ah soo gaartay – Filimside.net
Sheekada Isi Seeg Qaybta 8-aad: Sheekada oo meel gabo gabo ah soo gaartay
December 1, 2018 Zakarie Abdi
Is Xusuusin Qeybtii Hore:
Farxaan waxuu Farxiyo ku wargeliyay in ay Hooyo sii ogaato, isagana uu raadinayo xal kale, si uu u badbaadiyo nolosha Hooyadiis, sharafta walaashiis iyo midda guud ee qoyska.
guriga ayuu yimid, waxuu dukaday labbo rakco oo salaad ah, waxuuna alla ka baryay in uu waddo u furo, mar dambana uusan sameyn doonin fal uusan Eebbe raali ka aheyn.
Farxaan waxuu go’aansaday in uu raadiyo qof uu u maro qoyskii uu hore usoo xumeeyay, isagoo maanka ku haya waxa lagu soo dhigay, Hooyo Faadumo, waxaa durba niyaddiisa kuso dhacday in uu arrinka u bandhigo, Awoowe Cilmi oo ah Aabbaha dhalay Hooyada Xamdi, ama haddaan si kale kuugu dhigo Awoowaha Xamdi oo ah gabdhii uu hore usoo xumeeyay.
Ma sahlana in uu xalku kaa galo qoys aad 6 sanno ka hor soo xumeysay, waxaase Farxaan kala weyn dhibka heysta Hooyadii iyo farxad la’aanta walaashii Farxiyo.
Wuxuu wacay telka Awoowe Cilmi, waa uu ka qaban waayay, dhowr saacadood ka dib ayuu mar kale wacay, hadana, waa laga qaban waayay, waxuu ugu dambeyn go’aansaday in uu ka raadiyo Masjid uu Salaadda ku dukan jiray, xilli kasta.
Galab Casir ah, ayuu abbaaray masjidkii, waxuu ku dukaday Salaaddii Casir, inta Salaadda lagu jiray ayey ishiisu qabatay Awoowe Cilmi oo safka hore Salaadda qeyb ka ah, markli Salaaddii laga baxay ayuu dhinac fadhiistay, wuu isku sheegay.
Farxaan waxa uu yiri “Awoowe, qalad waa dhacaa, waxaan ahaa wiil dhallin yaro ah, oo markaas soo qaan-gaaray, ma dareemi karin xummaanta, waxa aan sameeyay qaladkooda maanta ayaan arkaa, waxaana kaa codsanayaa in aad gartaas gasho, waxaan gadaashaada usoo marayna waxey tahay in aan kuu arkay qofka kaliya ee maanta bad-baadin kara nolosha Hooyadeey, waxaan kuu heyn doonaa abaal aan la illaawin”.
Awoowe Cilmi oo ah oday da’ ah intiisa badanna waqtigiisa ku qaata Masjidkaan, ayaa ku yiri Farxaan “Diyaar ma u tahay in aad dib u saxdo qaladkaagii?, Farxaan waxuu ugu jawaabay “Haa, Awoowe”, Awoowe Cilmi ayaa ku wargeliyay Farxaan in uu iska baxo, dibna uu ugu soo laabto berri galab, xilligaan oo kale, Farxaanna waa soo tagay.
Awoowe Cilmi ayaa tagay guriga gabadhiisa ahna Hooyada Xamdi, waxa uu u yeeray Xamdi iyo Hooyadeed, waxuuna ku yiri “Ma aydaan sameynina wax saxan, yaa idin kula taliyay in aad ku fikirtaan aargoosi noocaan ah?, maxaad mar kale u ciqaabeysaan gabar aan waxba galabsan?.
Awoowe Cilmi oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Farxaan waa qaldamay, lkn, waxaa qalad ka weyn geystay idinka, intee naga aadeysaa cuqubadaan kale ee cusub?, tusaale ma idiin noqon weysay Istaahil?, labbo mid soo gala, in aad aniga sidaan doonayo wax lagu xalliyo, ama inaan isi sheegan.
Xamdi oo carreysneed ayaa tiri “Awoowe Xal kale ma jiro, waan kala qabnaa, halkeena aan kala joogno”.
Hooyada dhashay Xamdi ayaa afka ku dhufatay, waxeyna ku tiri “Soco bannaanka tag, yaa awood kuu siiyay in aad war ku celiso awoowahaa?.
Hooyo Cibaado iyo Awoowe Cilmi ayaa isku soo haray, waxey is jiid-jiidaanba waxey sheeko gaartay Far habaar ama Far duco, sidaas ayeyna hooyo Cibaado ku qaadatay fartii ducada.
Awoowe Cilmi ayaa galabkii dambe Masjidka kula kulmay Farxaan, waxuuna ku wargeliyay in uu keeno odayaal dhankiisa matala, howshana uu soo dhammeeyay.
Farxaan fadhiga ayuu ka kacay, waxuu ku foorarsaday awoowe Cilmi, waxuuna ka dhunkaday labbada dhaban, albaabka masjidka ayuuna kasoo baxay isagoo qosol gariir ku jira.
Uma uusan tagin Hooyo Faadumo oo xaalkeedu allow sahal yahay, waxuu wicitaan ku billaabay adeeryaal iyo Abtiyaal, waxuuna isku helay 2 Adeer iyo 1 Abti, sidii ayuuna ku tagay gurigii uu 6 sanno ka hor xumaanta dhexda ka istaajiyay, dhowaanna ay waji gabaxa kala soo kulantay hooyadii.
Farxaan iyo Xamdi mala isi siiyay?, mise Istaahil uun in uu qaato ayaa lagu xukmiyay?, Qeys iyo Farxiyo dhankooda maxaa la isku af gartay?, maxey dhashay Farxiyo?, maxaase loo baxshay?, Hooyo Faadumase badqab ma uga soo laabatay isbitaalka?.
La soco qeybta 9-aad
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 1-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 2-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 3-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 4-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 5-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 6-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan aqrisanin qaybtii 7-aad sheekadan fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 239
Asxaabay maxaad sheekada isa seeg u joojiseen
Filimside aad baan ula soconay sheekadan ee maxad nooga joojiseen pls noo sii wada